Is it better to sleep with underwears on or not? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ညအခါ မိမိအတှငျးခံကို ခြှတျအိပျသငျ့ မအိပျသငျ့
ခုလို ပူပူလောငျလောငျ နှရောသီမြိုးမှာ ပေါ့ပါးလှတျလပျတဲ့ ဘယျလိုအဝတျအစားမြိုးတှကေို ရှေးခယျြ ဝတျဆငျတတျကွဖို့ ယခငျက ရေးခဲ့ပွိးပွီမို့.. ခုတဈခါ ပူပွငျးတဲ့ နှရောသီညတှမှော အိပျစကျခြိနျတှငျ မိမိအတှငျးခံဝတျလကျြ အိပျသငျ့မအိပျသငျ့ ဆိုတဲ့ အကွောငျးလေး ပွောပွခငျြပါတယျ…
ညအိပျရာဝငျခြိနျမှာ တခြို့က. Pajama ၊ တီရှပျ ၊ ပုဆိုး စသဖွငျ့ ဝတျဆငျပွီး အိပျတတျကွပါတယျ.. သို့သျော မိမိအတှငျးခံကို ဝတျလကျြသားအိပျကွသလို ခြှတျပွီး အိပျကွတာလဲ ရှိပါတယျ.. ဒီတော့ကာ ဝတျအိပျခွငျး မအိပျခွငျးရဲ့ကောငျးကြိုးဆိုးကြိုးက ဘာတှလေဲ…
အမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့ တနကေုနျသှားလာလှုပျရှာနရေတဲ့အတှကျ ခြှေးတှေ အညဈအကွေးတှေ ရှိနနေိုငျပါတယျ…အိပျရာဝငျတဲ့ အခြိနျမှာလဲ အတှငျးခံကို ဆကျဝတျထားတဲ့အခါမှာ မိနျးမကိုယျတဝိုကျဟာ စိုထိုငျးဆ မြားပွီး ရောဂါပိုးမှားတှေ ပေါကျဖှားဖို့ရာ နရောတဈခု ဖွဈလာပါတယျ…ထိုမှတဆငျ့ မိနျးမကိုယျ ကွာရှညျရောငျရမျးခွငျး(chronic inflammation of vagina) ဖွဈနိုငျပါတယျ… ဘကျတီးရီးယားတှဟော အမှောငျကိုကွိုကျသလို စိုထိုငျးဆမြားတဲ့နရောကိုလဲ နှဈသကျကွတာမို့ အတှငျးခံမဝတျပဲ အိပျခွငျးအားဖွငျ့ လုံလောကျတဲ့ လေ ရရှိသလို ထိုနရောတဝိုကျကိုလဲ ခွောကျသှသေ့နျ့ရှငျးစနေိုငျပါတယျ…
တခြို့အမြိုးသမီးမြားအနဖွေငျ့ အတှငျးခံမပါပဲ အိပျစကျခွငျးကို မနှဈသကျပါက cotton(ဝါဂှမျး)ဖွငျ့ ပွုလုပျထားတဲ့ ပှပှယောငျးယောငျးအတှငျးခံမြိုး ဝတျဆငျပါ.. ထို့မှသာ ခြှေးထှကျမြားသျောလဲ စုပျယူမှု အားကောငျးတဲ့အတှကျ မိနျးမကိုယျတဝိုကျကို ခွောကျသှနေ့စေမှော ဖွဈပါတယျ… ပိုးသား၊ခညျြသားတှနေဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ အတှငျးခံကို ဝတျဆငျပါက တခါတရံမှာ ယားယံတာမြိုးတှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ…
ဒါပွငျ့ အမြိုးသမီးတှဖေို့ ရှောငျလှဲမရတဲ့ လစဉျ ဓမ်မတာ လာတဲ့အခါမြိုးမှာတော့ လိုအပျတဲ့ လစဉျသုံး pads တှေ tampons တှေ အသုံးပွုရလေ့ ရှိသလို ညအိပျရာဝငျတဲ့အခါ ပပှေတာမြိုး မဖွဈအောငျ အတှငျးခံကို ဝတျအိပျတတျကွပမေယျ့… အတှငျးခံကို လုံလုံလောကျလောကျလှဲလညျခွငျး၊ လစဉျသုံးပစ်စညျးကို တဈခုတညျး ကွာရှညျမသုံးစှဲခွငျး စသဖွငျ့ ဂရုစိုကျရပါမယျ…
အမြိုးသားမြားအနဖွေငျ့ အလှနျကွပျသော အတှငျးခံတှေ ဂငျြးဘောငျးဘီတှကေို နအေ့ခါမှာလညျး မဝတျဆငျသငျ့သလို ညမှာလဲ လှတျလပျပေါ့ပါးတဲ့ ပုဆိုး၊ ဘောငျးဘီတို စသဖွငျ့ လှဲလယျဝတျဆငျပွီး အိပျသငျ့ပါတယျ… အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော တငျးကွပျတဲ့အခါမှာ အပူခြိနျဟာ မွငျ့တကျလာပွီး ဝှေးစနေဲ့ အတှငျ့မှာ ရှိတဲ့ သုတျပိုးကို ထိခိုကျစနေိုငျတယျလို့ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတခြို့က ထောကျပွထားခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ…
အမြိုးသားဖွဈစေ အမြိုးသမီးဖွဈစေ လုံလောကျတဲ့ တကိုယျရညျ သနျ့ရှငျးမှု ရှိခွငျးအားဖွငျ့ အရပွေားနဲ့ သကျဆိုငျသော ကနျြးမာရေးပွသနာမြားကို ကာကှယျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ…
ကနျြးမာပြျောရှငျပွီး လှပသနျစှမျးသော အမြိုးသား အမြိုးသမီးမြား ဖွဈကွပါစလေို့ တောငျးဆု မတ်ေတာပွုလကျြ….
ညအခါ မိမိအတွင်းခံကို ချွတ်​အိပ်​သင့်​ မအိပ်​သင့်​
ခုလို ပူပူ​လောင်​​လောင်ေ​နွရာသီမျိုးမှာ ​ပေါ့ပါးလွတ်​လပ်​တဲ့ ဘယ်​လိုအဝတ်​​အစားမျိုး​တွေကို ​ရွေးချယ်​ ဝတ်​ဆင်​တတ်​ကြ​ဖို့ ယခင်​က ​ရေးခဲ့ပြိ်းပြီမို့.. ခုတစ်​ခါ ပူပြင်းတဲ့ ​နွေရာသီည​တွေမှာ အိပ်​စက်​ချိန်​တွင်​ မိမိအတွင်းခံဝတ်​လျက်​ အိပ်​သင့်​မအိပ်​သင့်​ ဆိုတဲ့ အ​ကြောင်း​လေး ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​…
ညအိပ်​ရာဝင်​ချိန်​မှာ တချို့က. Pajama ၊ တီရှပ်​ ၊ ပုဆိုး စသဖြင့်​ ဝတ်​ဆင်​ပြီး အိပ်​တတ်​ကြပါတယ်​.. သို့​သော်​ မိမိအတွင်းခံကို ဝတ်​လျက်​သားအိပ်​ကြသလို ချွတ်​ပြီး အိပ်​ကြတာလဲ ရှိပါတယ်​.. ဒီ​တော့ကာ ဝတ်​အိပ်​ခြင်း မအိပ်​ခြင်းရဲ့​ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး​က ဘာ​တွေလဲ…
အမျိုးသမီး​တွေအ​နေနဲ့ တ​နေကုန်​သွားလာလှုပ်​ရှာ​နေရတဲ့အတွက်​ ​ချွေး​တွေ အညစ်​အ​ကြေး​တွေ ရှိ​နေနိုင်​ပါတယ်​…အိပ်​ရာဝင်​တဲ့ အချိန်​မှာလဲ အတွင်းခံကို ဆက်​ဝတ်​ထားတဲ့အခါမှာ မိန်းမကိုယ်​တဝိုက်​ဟာ စိုထိုင်းဆ များပြီး ​ရောဂါပိုးမွှား​တွေ ​ပေါက်​ဖွားဖို့ရာ ​နေရာတစ်​ခု ဖြစ်​လာပါတယ်​…ထိုမှတဆင့်​ မိန်းမကိုယ်​ ကြာရှည်​​​ရောင်​ရမ်းခြင်း(chronic inflammation of vagina) ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​… ဘက်​တီးရီးယား​တွေဟာ အ​မှောင်​ကိုကြိုက်​သလို စိုထိုင်းဆများတဲ့​နေရာကိုလဲ နှစ်​သက်​ကြတာမို့ အတွင်းခံမဝတ်​ပဲ အိပ်​ခြင်းအားဖြင့်​ လုံ​လောက်​တဲ့ ​လေ ရရှိသလို ထို​နေရာတဝိုက်​ကိုလဲ ​ခြောက်​​သွေ့သန့်​ရှင်း​စေနိုင်​ပါတယ်​…
တချို့အမျိုးသမီးများအ​နေဖြင့်​ အတွင်းခံမပါပဲ အိပ်​စက်​ခြင်းကို မနှစ်​သက်​ပါက cotton(ဝါဂွမ်း)ဖြင့်​ ပြုလုပ်​ထားတဲ့ ပွပွ​ယောင်း​ယောင်းအတွင်းခံမျိုး ဝတ်​ဆင်​ပါ.. ထို့မှသာ ​ချွေးထွက်​များ​သော်​လဲ စုပ်​ယူမှု အား​ကောင်းတဲ့အတွက်​ မိန်းမကိုယ်​တဝိုက်​ကို ​ခြောက်​​သွေ့​နေ​စေမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​… ပိုးသား၊ချည်​သား​တွေနဲ့ပြုလုပ်​ထားတဲ့ အတွင်းခံကို ဝတ်​ဆင်​ပါက တခါတရံမှာ ယားယံတာမျိုး​တွေ ဖြစ်​​စေနိုင်​ပါတယ်​…
ဒါပြင့်​ အမျိုးသမီး​တွေဖို့ ​ရှောင်​လွဲမရတဲ့ လစဉ်​ ဓမ္မတာ လာတဲ့အခါမျိုးမှာ​တော့ လိုအပ်​တဲ့ လစဉ်​သုံး pads ​တွေ tampons ​တွေ အသုံးပြုရ​​လေ့ ရှိသလို​ ညအိပ်​ရာဝင်​တဲ့အခါ ​ပေပွတာမျိုး မဖြစ်​​အောင်​ အတွင်းခံကို ဝတ်​အိပ်​တတ်​ကြ​ပေမယ့်​… အတွင်းခံကို ​လုံ​လုံ​လောက်​​လောက်​လှဲလည်ခြင်း၊ လစဉ်​သုံးပစ္စည်းကို တစ်​ခုတည်း ကြာရှည်​မသုံးစွဲခြင်း စသဖြင့်​ ဂရုစိုက်​ရပါမယ်​…
အမျိုးသားများအ​နေဖြင့်​ အလွန်​ကြပ်​​သော အတွင်းခံ​တွေ ဂျင်း​ဘောင်းဘီ​တွေကို ​နေ့ အခါမှာလည်း မဝတ်​ဆင်​သင့်​သလို ညမှာလဲ လွတ်​လပ်​​ပေါ့ပါးတဲ့ ပုဆိုး၊ ​ဘောင်းဘီတို စသဖြင့်​ လှဲလယ်​ဝတ်​ဆင်​ပြီး အိပ်​သင့်​ပါတယ်​… အဘယ်​​ကြောင့်​ဆို​သော်​ တင်းကြပ်​တဲ့အခါမှာ အပူချိန်​ဟာ မြင့်​တက်​လာပြီး ​ဝှေး​စေ့နဲ့ အတွင့်​မှာ ရှိတဲ့ သုတ်​ပိုးကို ထိခိုက်​​စေနိုင်​တယ်​လို့ ​လေ့လာ​တွေ့ရှိချက်​တချို့က ​ထောက်​ပြထားခြင်း​ကြောင့်​ ဖြစ်​ပါတယ်​…
အမျိုးသားဖြစ်​​စေ အမျိုးသမီးဖြစ်​​စေ လုံ​လောက်​တဲ့ တကိုယ်​​ရည်​ သန့်​ရှင်းမှု ရှိခြင်းအားဖြင့်​ အ​ရေပြားနဲ့ သက်​ဆိုင်​​သော ကျန်းမာ​ရေးပြသနာများကို ကာကွယ်​နိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​…
ကျန်းမာ​ပျော်​ရွှင်​ပြီး လှပသန်​စွမ်း​သော အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ ဖြစ်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု ​မေတ္တာပြုလျက်​….